Tapaka ve ny 5SOS? Nipoaka ny Twitter rehefa naneso ny mozika solo-tena ho avy i Luke Hemmings - Pop-Kolontsaina
Tapaka ve ny 5SOS? Nipoaka ny Twitter rehefa naneso ny mozika solo-tena ho avy i Luke Hemmings
5 Segondra amin'ny Fahavaratra (5SOS) dia namoaka vaovao indray, amin'ity indray mitoraka ity dia momba ny mpihira lohan'izy ireo, Luke Hemmings
Nandroso hatrany ny tarika pop-rock avy any Aostralia hatramin'ny nanombohany tamin'ny faran'ny taona 2011, izay nanasongadinana ny lohateny hoe noho izy ireo nalaza taorian'ny famoahana ny rakikirany voalohany, 'She Looks So Perfect.'
Nahavita nijanona ambony anaty indostrialy izy ireo ary nanamboatra toerana ho azy ireo nanomboka teo, saingy miaraka amin'ny lazany maharitra sy ny fanbase mavitrika, dia azo inoana fa hisy tsaho miely etsy sy eroa koa.
Ny mpikambana farany ao amin'ny 5SOS namorona ny haino aman-jery sosialy dia i Luke Hemmings, mpitendry feo ary mpitendry gitara gadona an'ny tarika. Ny fiovan'ny fitondran-tenany tao amin'ny media sosialy dia nahatonga ny mpankafy hiresaka, miaraka amin'ny tsaho momba ny fanaparitahana 5SOS mivezivezy manodidina ny vondrom-piarahamonina mpankafy.
Vakio ihany koa: Lil Nas X dia nitehaka tamin'ny mpankahala rehefa lasa malaza be amin'ny Internet ny Kiss Kiss BET
ahoana ny fijanonana amin'ny fahatsapana ho resy
Misaraka ve ny 5SOS?
Nanomboka nipoaka ny resaka nifanaovan'ny vondrom-piarahamonina mpankafy rehefa nanova ny filaminan'ny tranokalany i Luke Hemmings an'i 5SOS ary nampakatra ny sariny niasa tamina studio mozika irery. Satria tsy namoaka mozika ny 5SOS hatramin'ny rakipeon'izy ireo 'Calm' tamin'ny taona 2020, dia nanatsoaka hevitra ireo mpankafy fa nisaraka tamin'ny vondrona i Luke na efa rava ilay vondrona.
andraso i luke avela 5sos? / gen
- ً samya? ¿(@Lhhsfairy) 29 Jona 2021
torak'izany koa ny 5sos sa manao projet irery izy ireo
- hafa (@butterflyhoax) 29 Jona 2021
Fantatro fotsiny fa hisaraka tsy ho ela ny 5sos ary mandratra ahy); https://t.co/BaWVYnClRk
- pkicis (@pkicis) 29 Jona 2021
Tsia, tsy misaraka izy ireo
Raha ny marina, Luke Hemmings dia hita tao amin'ny tantaran'ny Instagram mpikambana 5SOS an'i Michael andro vitsy lasa izay niaraka tamin'ny sisa tamin'ny tarika, izy rehetra dia niantona tao amin'ny studio mozika.
Lahatsoratra zarain'i LUKE HEMMINGS UPDATE (@updatinglrh)
Vakio ihany koa: Inona no nataon'ny rahavavin'i Britney Spears taminy?
Ilay hafatra miafina ao amin'ny tantaran'i Luke Hemmings sy ireo sary navoakany dia teaser daholo ho an'ny rakikirany irery. Nisioka mpanafika momba ilay hira tao amin'ny kaonty Twitter ofisialiny izy, miaraka amin'ny fampahalalana momba ny daty famoahana sy ny fotoana.
Rahampitso 9 alina PT https://t.co/NlZxd8XUMs pic.twitter.com/I4lpDnsbdF
- Luke Hemmings (@ Luke5SOS) 29 Jona 2021
Raha vantany vao tsapan'ny mpankafy dia naka ny Twitter izy ireo mba hizara ny fihetsik'izy ireo mientanentana amin'ny fiandrasana ny fidinana amin'ireo mpikambana hafa ao amin'ny vondrom-piarahamonina mpankafy 5SOS.
izaho: 5sos tsy mihetsika dia malahelo azy ireo aho):
5sos: HITANANAO VONJEVITRA VE IZANY ?????
izaho: miandry -
luke: AOKA ISIKA FANTARO IZAO
- ny tantely dia tsy salama bc an'i luke (@loukissbot) 29 Jona 2021
tsy sweetie izao, luke hemmings vao nanao fanambarana mozika ary 5sos twitter dia mihozongozona pic.twitter.com/yKyGuMwzr0
- fi fy fo fum (@chrryluke) 29 Jona 2021
izaho matory 5sos stan twt
noho ny LH1 pic.twitter.com/SOp1KBag7A
- mimi MANIFESTED LH1 (@FINELINEHSLT) 29 Jona 2021
Navoaka ny stans lukas 5sos
miandry mozika irery 5sos5 pic.twitter.com/bWIeTiQEpP
- rin (@houaylorshome) 29 Jona 2021
mety ve ianao? bro, luke hemmings dia mandatsaka rakikira solo, ahoana ny hevitrao ????
- ً (@girlstalkcurls) 29 Jona 2021
Luke hemmings 🤝 Ashton Irwin
VOLANA SY namoaka ALBUMA SOLO
- Finoanaᶜᵃ✨LH1 TONGAVA (@cthfaith) 29 Jona 2021
Ashton irwin sy luke hemmings mamoaka mozika solo no zavatra tsara indrindra hitranga amiko
- Sofi🦋 (@moongxrI) 29 Jona 2021
Tsy ity no ohatra voalohany an'ny mpikambana 5SOS mivoaka miaraka amina rakikira solo. Ashton Irwin, ilay mpitendry amponga an'ny tarika, dia namoaka ny rakikirany manokana mitondra ny lohateny hoe 'Superbloom' tamin'ny Oktobra 2020. Tsy lazaina intsony, faly tokoa ireo mpankafy amin'ny vaovao tsy ampoizina momba ny rakipeon'i solo solo Luke ary manantena ny famoahana azy ireo.
Vakio ihany koa: Justin Bieber dia namela ny Internet hizarazara taorian'ny nandrisihany ny mpankafy mba hitsahatra tsy hivezivezy ivelan'ny trano NYC
fahatokisana sy fahatokiana amin'ny fifandraisana
fanontaniana apetraka amin'ny hafa manan-danja
heveriko fa tsy anisan'ity tontolo ity aho
lisitry ny teny tsara hilazana ny tenanao
fomba tsara indrindra hanaovana veloma ny mpifoka rongony
diso fanantenana tamin'ny fianakaviako aho